Mpanamboatra sy mpamatsy masinina sakafo - Afaka manao masinina fanaovana sakafo i Sina
Fryer dia ampiasaina hanendasana falafel, tempura, baolina hena, poti-ovy, poti-akondro, akoho iray manontolo, tongotr'akoho, akoran'akoho, akoran-kena, patsa, voanjo, tsaramaso, legioma ary vokatra hafa.
Fitaovana manohana an-dakozia mahazatra ampiasaina dia misy: fitaovana entona, toy ny setroky ny setroky ny setroka setroka, fantson-drivotra, kabinetran'ny rivotra, fanadiovana setroka solika ho an'ny entona mandrehitra sy fitsaboana rano maloto, mpanasarahana solika, sns.
Milina vatomamy malefaka sy fikorianan'ny tsipika famokarana: (1) famoahana siramamy; (2) fampitana siramamy; (3) mitazona hafanana ao anaty fitoeram-pitehirizana; (4) mifangaro ho an'ny tsiro sy siramamy; (5) syrup ho hopper; (6) fametrahana (famenoana). (7) mangatsiaka ao anaty tionelina; (8) fampisehoana sy fampangatsiahana miaraka amin'ny fampitana azy; (9) fonosana. Ny vatomamy (anglisy: vatomamy) dia azo zaraina ho vatomamy mafy, vatomamy sandwich mafy, vatomamy ronono, vatomamy gel, vatomamy voakilasy, vatomamy mifototra amin'ny siligaoma, vatomamy tsy azo ovaina ary vatomamy noterena. Anisan'izany, mafy ca ...
Ny tsipika famokarana pasta dia fitaovana fanodinana sakafo pasta natsofoka novolavolaina sy novokarina tamin'ny alàlan'ny fitrandrahana teknolojia vahiny mandroso. Ny fahombiazan'ny fitaovana sy ny kalitao teknika dia nahatratra ny ambaratonga avo lenta amin'ny fitaovana iraisam-pirenena mitovy amin'izany.
Ny labiera vita amin'ny labiera tena manokana dia manondro ireo fitaovana ampiasaina hamokarana labiera, izay azo zaraina ho fitaovana labiera vaovao, fitaovana bitika kely ary fitaovana labiera kely. Ny kojakoja fanaovana labiera vao avy namboarina manokana dia tena mety amin'ny hotely, bara, barbecue, labiera kely sy salantsalany.